Iyaqhuba ngomsebenzi wayo iBlaahs | News24
Iyaqhuba ngomsebenzi wayo iBlaahs
Umbutho iBlaahs Society ibindwendwele inkonzo iSt Raphael Catholic eKhayelitsha.
Omnye weyona mibutho midala yokuhlala iBlaahs Society utyelele ibandla lamaKatolika, iSt Raphael Catholic eKhayelitsha, ngeCawa edlulileyo njengephulo lawo lonyaka lokwenza utshintsho ekuhlaleni.
Lo mbutho, nothe kunyaka ophelileyo wabhiyozela ukufinca ama 40 eminyaka wasekwayo, uzingomba isifuba ngokwenza utshintsho kwiindawo ezininzi kwiilokishi zabantsundu kwiphondo iNtshona Koloni nangaphandle kwemida yayo.
Nangona wamiselwa njengo mbutho ka masingcwabane ngomnyaka ka 1978, lo mbutho ubonakalise uhlumo kwiminyaka edlulileyo ngokuthi ungenelele kwiingxaki ezijongene nokuhlala, nalapho kukho khona ukuswela.
Ephawula ngenjongo zalo mbutho uMbulelo Mpofu, nongusomlomo, uthe iBlaahs ijongene nokuphuhlisa impilo yoluntu ngokwe zezimali nangokunika isidima kwimpilo zabantu.
Wongeze ngelithi iBlaahs ikhule ngendlela esi simanga kule minyaka idlulileyo, kwaye bakwazile nokumisela amasebe ombutho nakwamanye amaphondo.
Ngelokuzama ukuba bahlale bekufuphi noluntu kwaye bezazi neemfuno zalo uthe rhoqo ngonyaka baye batyumbe iinkonzo ezimbini abazakuzindwendwela.
“Siye sindwendwele iinkonzo ezimbini esizityumbileyo sisenzela ukukhuthaza amalungu ethu ukuba ahlale ekhonza angahlukani noThixo,” utshilo uMpofu.
U-Mpofu uthe amalungu alo mbutho akholose ngo Yehova kwaye akholelwa kakhulu emthandazweni, ntoleyo yenza bacele iinkonzo ukuba zibathandazele ngamaxesha onke.
Uthe le nkonzo bebeye kuyo iye yabamnkela ngezandla ezinobubele ukusukela kumfundisi, usihlalo wayo kwakunye namalungu.
Woleke ngelithi ixesha le Lente balithatha njengelibaluleke kakhulu kwikhalenda yabo, kungoko baye baqinisekise ukuba bandwendwela amabandla.
Ubambe ngazo zozibini kweli bandla nakuwo onke amabandla athe abanika inkxaso, watsho ehlomla kwiNdumiso zika Davide: “Musa ukundilahla ebusweni bakho, umoya wakho oyingcwele ungamsusi kum”.